Wararka - Maxaan sameeyaa ka dib markaan si buuxda uga tallaalo COVID-19?
358 Xaydaanka xatooyada Anti
Xayndaabka siligga birta ah
Maxaan sameeyaa ka dib markaan si buuxda uga tallaalo COVID-19?
In kasta oo inbadan oo naga mid ah ay si walaac leh u sugayaan maalinta aan balan ka qabsan karno tallaalka COVID-19, maalintani waa laga soo hor mari karaa intaad u maleynaysid. Gudoomiyaha Gavin Newsom (Gavin Newsom) wuxuu sheegay in laga bilaabo Abriil 15keeda, dhamaan dadka reer Californianka ah ee jira 16 sano iyo wixii ka weyn ay balan ka sameysan karaan talaalka COVID-19 ee bilaabanaya Abriil 1, 50 iyo 50 sano. Dadka da'da ka weyn waxay awoodi doonaan inay ballamo si dhakhso leh u sameeyaan.
Dalka oo dhan, Madaxweyne Biden wuxuu ku dhawaaqay in qof kasta oo qaangaar ah oo ku nool Mareykanka uu xaq u yeelan doono tallaalka ka hor 1da Maajo, “Ujeeddadu waa in Mareykanka loo dhowaado heerarka caadiga ah ugu dambeyn 4-ta Luuliyo.”
Iyadoo tan oo dhan maskaxda lagu hayo, waxaa laga yaabaa inaad isweydiiso: maxaad sameyn kartaa ka dib marka aad si buuxda u tallaasho? Iyo, laga yaabee in ka sii muhiimsan, maxaad sameyn weyday?
Waa muhiim in la ogaado in aan lagaa ilaalin doonin coronavirus isla marka tallaalka ugu horreeya ka dib. Taasi waa sababta oo ah waxay qaadataa waqti jirkaaga ah si loo dhiso unugyada difaaca jirka ee lagama maarmaanka ah, kuwaas oo kaa difaaci kara COVID-19.
Sida laga soo xigtay Xarumaha Xakamaynta iyo Kahortagga Cudurrada, waxaa lagugu tixgeliyaa "si buuxda loo ilaaliyaa" iyo "si buuxda loo tallaalay" laba toddobaad ka dib qaadashada tallaalka Pfizer BioNTech ama Moderna COVID-19 markii labaad, ama laba toddobaad kadib hal tallaal oo keliya "Johnson & Johnson (Johnson & Johnson / Janssen) tallaalka COVID-19.
Marka sidee bay ahayd xasaanaddaadii taas ka hor? Tallaalada Moderna iyo Pfizer-BioNTech, qiyaasta ugu horeysa waxay ku siin doontaa inta badan kahortaga cudurada halista ah, iyo qiyaasta labaad ayaa halkaas ku geyn doonta. Intaa waxaa dheer, khubaradu waxay aaminsan yihiin in qiyaasta labaad ay dheereyn karto muddada tallaalka.
Wachter wuxuu yiri 14 maalmood kadib talaalkii ugu horeeyey ee Moderna ama Pfizer-BioNTech, celcelis ahaan 80% ayaa lagaa ilaaliyaa. (Haddii aad rabto inaad ka fikirto ka-boodidda qiyaasta labaad, xusuusnow in tijaabada tallaalku ay tahay laba qiyaasood, markaa fahamkeenna ku saabsan saamaynta tallaalku wuxuu ku xidhan yahay laba qiyaasood.)
The Johnson / Johnson single dose wuxuu bixiyaa 66% guud ahaan difaac laba toddobaad kadib. Ka dib 28 maalmood, waxay si wax ku ool ah uga hortagi kartaa cudurro daran ama daran oo leh saameyn 85%. Akhri wax dheeraad ah oo ku saabsan sida difaaca jirka uu u kobco tallaalka kadib.
Dr. Peter wuxuu yiri: “Aad ayey muhiim u tahay in la sugo labo todobaad kadib cirbadda ugu dambeysa, maxaa yeelay qof walba isku mid ma aha, in kastoo dadka qaar ay helaan faa'iidooyin hore iyadoo la sameynayo unugyada difaaca jirka ee ka hortagga borotiinnada kor u kaca, maahan Tani run maahan dadka badankood. ” Chin-Hong, oo ah borofisar daawo iyo khabiir ku ah cudurrada faafa ee UCSF.
“Ma ogin cidda goor hore jawaab celin doonta. Sidaa darteed, mudada laba todobaad ah ee daaqada ayaa la siiyaa qof kasta ka dib cirbadeynta ugu dambeysa, taas oo na siinaysa kalsooni aan ugu dhaqmo sida dadka tijaabooyinka caafimaadka, ”ayuu yidhi.
Nooc Gaaban: Sii tallaalka waqtiga ay ku qaadaneyso in jirkaaga looga ilaaliyo COVID-19. Waxaad u baahan tahay inaad qaadatid dawada muddo laba toddobaad ah si aad tallaalka gebi ahaanba u hesho.
Sida laga soo xigtay CDC, in kasta oo daraasado hordhac ah ay muujiyeen in dadka si buuxda loo tallaalay ay u yar tahay inay u gudbiyaan fayraska si aan macquul ahayn, weli way socotaa. Tani waa sababta aan uga hadlayno dadka la tallaalay oo mararka qaarkood weli u baahan inay qaadaan tallaabooyin ka hortag ah.
Dr. Chin-Hong ayaa tiri: “Hada waxaa jira cadeymo badan oo muujinaya in aysan macquul aheyn in dadka la talaalay ee si buuxda loo talaalay ay ku faafaan dadka aan la talaalin. Si kastaba ha noqotee, fursadda guud waa mid aad u yar, ayay tiri Dr. Chin-Hong. .
Sidaa darteed, sida dhammaan dhacdooyinka aafada ah, waxaa ugu wanaagsan in lagu sii wado taxaddar si loo ilaaliyo asxaabtaada, qoyskaaga, iyo bulshada weyn, oo aad raacdo tilmaamaha hoose.
Nooca gaaban: Weli ma hubno in haddii si buuxda looga tallaalo COVID-19 ay kaa horjoogsanayso inaad faafiso fayraska. Sidaa darteed, xaaladaha qaarkood waxaad weli u baahan tahay inaad taxaddar qaadato.
CDC-da ayaa sheegtay in halista qof si buuxda loo tallaalay oo leh COVID-19 ay tahay mid “hooseysa” - laakiin waxa dhabta ah ee ay tahay inaad ka digtoonaato waa astaamaha COVID-19.
Haddii aad la kulanto qof laga shakisan yahay ama laga helay COVID-19, laakiin lagu tallaalay oo aadan lahayn astaamo u eg COVID, uma baahnid in lagaa karantiilo oo uma baahnid in lagaa baaro coronavirus. CDC-da waxay tiri waa sababta oo ah halista infekshinka aad ayuu u hooseeyaa.
Si kastaba ha noqotee, haddii aad soo shaac baxdo oo aad yeelato calaamado, CDC waxay sheegaysaa inaad ka go'doomiso dadka kale oo aad baaritaan sameyso. Markay tani dhacdo, waa muhiim inaad u sheegto bixiyahaaga daryeelka caafimaad inuu ogaado inaad si buuxda u tallaashay.
CDC waxay kaloo siisaa hagitaan faahfaahsan oo loogu talagalay dadka si buuxda loo tallaalay ee ku nool ama ka shaqeeya meelaha la isugu yimaado ama goobaha shaqada ee cufnaanta badan.
Marka la soo koobo: khatarta ah in la qaado COVID-19 ka dib marka si buuxda loo tallaalo way yar tahay, laakiin ka taxaddar calaamadaha.
Haa, waad awoodaa! Tilmaamaha Xarumaha Xakamaynta iyo Kahortagga Cudurrada ee Maraykanka (CDC) ayaa sheegaya in dadka la tallaalay ay la joogi karaan gudaha guryaha dadka kale ee la tallaalay iyagoon lahayn waji-shareer iyo kala fogaynta bulshada.
Tusaale ahaan, Xarumaha Xakamaynta iyo Kahortagga Cudurrada (CDC) waxay sheegeen in haddii aad si buuxda u tallaasho, "ay aad u yar tahay inaad ku casuuntid asxaabta kale ee tallaalka buuxa leh inay gurigaaga gaarka ah ugu casheeyaan."
Si kastaba ha noqotee, CDC-du waxay wali ku dhiirigalinaysaa dadka si buuxda u tallaalay inay isu soo uruuriyaan kulamadan dhamaadka kale. Waxay tiri tani waa sababta oo ah "shirar dhexdhexaad ah ama weyn, iyo isu imaatinno ay ku jiraan dad aan la tallaalin oo ka soo jeeda qoysas badan" waxay kordhin doonaan halista faafitaanka COVID-19.
Dr. Chin-Hong wuxuu yiri: "Tiradu waa muhiim maxaa yeelay waa uun tirada sanka iyo afka dadka ka kala yimid kooxaha halista ee kala duwan." “Inta badan ee dadka aad qaadatid (aad is tallaashey ama aan la talaalin), ayey sii kordheysaa dadka aan u jawaabi karin tallaalka iyo suurtagalnimada Waxay sii badaneysaa fursadaha ay dadka ugu dhici karaan COVID. Sidaa darteed, kani runti waa ciyaar tirakoob. ”
Haddii lagaa tallaalay oo aad aragtay inaad yeelatay shirar badan, CDC-du waxay kugula talineysaa inaad sii wado ku celcelinta hababka ka hortagga COVID-19, oo ay ku jiraan hoyga iyo ka fogaanshaha bulshada.
Marka la soo koobo: waa halista yar ee qofka la tallaalay inuu la seexdo qofka la tallaalay, laakiin weli waxay ka dhigaysaa kooxdaada mid yar.
Sida laga soo xigtay Xarumaha Xakamaynta iyo Kahortagga Cudurrada (CDC), haddii adiga (qof tallaal buuxa) aad booqanayso guriga qof aan tallaalnayn, waa inaad awood u leedahay inaad ku booqato gudaha iyo maaskaro la'aan. Si kale haddii loo dhigo, illaa iyo inta dadka aan la tallaalin aysan khatar sare ugu jirin qaadista COVID-19.
Xitaa haddii mid ka mid ah dadka aan la tallaalin uu yahay koox khatar sare leh, adiga (qofka la tallaalay) weli waad ku booqan kartaa gudaha, illaa iyo inta aad ku tababbarayso tallaabooyinka ka-hortagga COVID-19, sida xirashada waji-cufan iyo ugu yaraan 6 fuudh Fogaanta , dooro meel hawo fiican leh oo dhaq gacmahaaga. Haddii aad sidoo kale booqanaysid dad aan la tallaalin oo ka socda qoysas badan, taladani sidoo kale way khuseysaa.
Iyo, sidaan horay u soo sheegnay, haddii aad kulan dhexdhexaad ah ama ballaadhan la leedahay dad badan (iyada oo aan loo eegin haddii la tallaalay iyo in kale), waa inaad sii wadataa qaadashada taxaddarka COVID-19, sida ka bixidda bulshada iyo maaskaro.
Waxaa jira infographic anfacaya oo ku yaal dusha sare ee CDC kaas oo liis garaya xaaladahan. Maxaad ugu kaydin la’dahay taleefanka?
Bayaanka gaagaaban: Haddii uusan qofna ku jirin khatar sare, waxaad la joogi kartaa reer aan talaalnayn, ha xirto maaskara ama ha ka fogaan. Waxaa jira waxyaabo kale oo ah in fiiro gaar ah loo yeesho.
Dhawaan, dhowr degmo oo ka tirsan aagga Baay ayaa galay qiimeynta liinta, taas oo muujineysa in halista gudbinta coronavirus ay tahay "dhexdhexaad." Tani waxay ka dhigan tahay in dadku ku laaban karaan tiyaatarada filimada, maqaayadaha, iyo xarumaha jirdhiska, haddii ay heleen tallaalka iyo haddii kaleba, in kasta oo ay yartahay awoodda meelahan.
Si kale haddii loo dhigo, xitaa haddii aad si buuxda u tallaashay, waa inaad sii wadataa inaad ku dhaqanto caadooyinka caafimaadka bulshada, “oo ay ka mid yihiin xirashada maaskaro, ilaalinta masaafada jidhkaaga (ugu yaraan 6 fuudh), ka-fogaanshaha dadka badan, ka fogaanshaha meelaha hawo-xumadu ka jirto, qufaca iyo hindhisada”, iyo Dhaq gacmahaaga badanaa. “Marka loo eego hagida CDC.
Nooc Gaaban: haddii uu furan yahay, markaa waad tegi kartaa! Si kastaba ha noqotee, maadaama aynaan wali hubin in dadka la tallaalay uusan faafin doonin COVID-19, waa inaan weli qaadnaa tallaabooyinka ka hortagga fayraska, sida xirashada waji-furka iyo fogeynta.
Illaa iyo hadda, CDC ma aysan cusbooneysiin hageheeda socdaalka. Waaxda Caafimaadka Bulshada ee Kalifoorniya waxay wali kula talineysaa dadka deegaanka inaysan u safrin wax ka badan 120 mayl guryahooda ilaa ay ujeeddooyin aasaasi ah mooyaane.
CDPH sidoo kale waxay si gaar ah uga mamnuucaysaa dalxiisayaasha safarka ama safarka firaaqada ah, markaa waxaa laga yaabaa inaad sugto inaad ballansato fasaxa illaa inta tilmaamaha rasmiga ahi is beddelayaan.
Dr. Chin-Hong oo ka tirsan Jaamacadda California, San Francisco wuxuu yiri sababta CDC u soo saari weydo hage safar cusub waxay u egtahay inay macquul tahay-maxaa yeelay waxaad la kulmi kartaa dad aad u tiro badan oo ka mid ah dadka la tallaalay iyo kuwa aan la tallaalin markii aad safreyso ahmiyad astaan.
Wuxuu yiri: "Intii lagu jiray mudooyin kala duwan oo ka dillaacay Mareykanka, ma doonayaan inay dhiiri geliyaan dhaqdhaqaaqa." Sababtoo ah safarka iyo safarku had iyo jeer waxay la xiriiraan kororkii hore ee Mareykanka, waxay rajeynayaan… in aan lagu dhiirrigelin tan xilligan jilicsan. Nooca dhaqdhaqaaqa. ”
Waqtiga boostada: Mar-29-2021
Buug-yaraha sheyga sheyga ee FRP
Maxaan sameeyaa ka dib markaan si buuxda u dheecaano ...
Farxad Saanad Ciid!
Qiimaha Waxyaabaha Cagaaran ee Birta Ah Sii Kordhi.
Steel shabaggeeda, shabaggeedii FRP, welded Iron F ...
Cinwaanka: A1608 Chuangxin Dhismaha, 315 Changjiang Avenue, Aagga teknolojiyada sare, Shijiazhuang, Gobolka Hebei. Shiinaha